စက်ရုံကြမ်းခင်းများအား ထိခိုက်မှုဒဏ်မှကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေးဖြစ်ပြီး ထူးခြားသောအားသာချက် (၄)ခုဖြစ်သည့် စုတ်ပြဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ပေါက်ပြဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ပိုးမွှားဒဏ်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ဓာတုဆေးရည်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း စသည့်ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် ပြည့်စုံသော ကြမ်းခင်းသုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။. အထူးသဖြင့် စက်ရုံများ ၊ ပြခန်းများ ၊ ဂိုထောင်များ၏ ကြမ်းခင်းများတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။
Epoxy ကြမ်းခင်းဆေးမသုတ်မှီ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။. ကြမ်းခင်းပေါ်ရှိ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးသောအက်ကြောင်း များနှင့် ချိုင့်အပေါက်များအား အပေါက်ဖာသည်ကော်နှင့် Epoxy ပတ်တီးအား အသုံးပြု၍ ကြမ်းခင်း မျက်နှာပြင်ညီညာမှုရှိစေရန် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
APT VIETNAM ၏အချက်အလက်များ
APT VIETNAM COMPANY ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည့် သက်တမ်းအတွင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလောကတွင် စစ်မှန်၍ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေသော ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ . Honda, Acekook ကဲ့သို့သောစက်ရုံကြီးများတွင် APT Vietnam ၏ထုတ်ကုန်များအား ၀န်ဆောင်မှုပေး နိုင်ခြင်း အတွက်များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် မိပါသည်။